izay niaingan’ny valan’aretina. Tany Atsimo Atsinanan’i Guinée no tena nahitana azy indray ny desambra 2013, raha efa tany amin’ny taona 1976 no nahitana azy voalohany tany RD Congo. Viriosy matanjaka mifindra amin’ny alalan’ny fofon’aina sy ny hatsembohana miteraka “fièvre hémorragique », izay mamono haingana dia haingana izy io. Nahitana io trangan’aretina io indray tao Goma tanàn-dehibe faharoa ao RD Congo ny 14 jolay teo, izay manakaiky ny sisin-tany mampizara azy amin’i Rwanda. Ny volana jona lasa teo ihany koa dia efa tranga roa no hita tao Ouganda. Voatery nanao fanambarana fisian’ny hamehana ara-pahasalamana maneran-tany na “Urgence sanitaire mondiale » ny sampandraharaha iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ny OMS noho ny zava-misy. Ahiana hiparitaka indray aty Afrika io aretin-doza io, ka tandindonin-doza i Madagasikara. Ho antsika eto Madagasikara dia tsy diso anjara amin’izany ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka. Ankoatra ny fananganana ny komity hanara-maso izany miaraka amin’ny mpiara-miombon’antoka dia arahi-maso akaiky avokoa ireo vahiny mivoaka sy miditra eto amintsika toy ny eny amin’ny seranam-piaramanidina eny Ivato sy ny eny amin’ny seranan-tsambo maro isan-tsokajiny. Hisy mihitsy ny fitaovana hapetrak’izy ireo arahin’ny fampiharana ilay fandaharan’asan’ny OMS amin’ny alalan’ny fanaparitahana ny vaksiny iadiana amin’ity areti-mandoza iray ity.